Home News Maamulka Gobolka Banaadir oo ku fashilmay sugida amaanka Magaalad Muqdisho
Maamulka Gobolka Banaadir oo ku fashilmay sugida amaanka Magaalad Muqdisho
Maamulka gobolka Banaadir ayaa xalay dhagxaan ku jaray kala wareeggii Isgoyska Zoobe ee Muqdisho ,halkaasi oo maalmihii lasoo dhaafay laga sameeyay Mashquul iyo Saxmad badan.
Ciidamada iyo maamulada degmooyinka Hodon iyo Wadajir ayaa xalay fuliyay Amar ay sheegeen in uu kasoo baxay Madaxda gobolka Banaadir oo ahaa in dhagaxaan lagu jarayo Isgoyska Soobe.
Gaadiidka raba in ay aadaan Buulo Xuubeey ayaa ka soo wareegaya Al-baabka Wasaaradda Arimaha Dibadda halka gaadiidka raba in ay aadaan Banaadir ay kasoo wareegi doonaan Laamiyaraha Zoobe ee Muqdisho.
Sababta ayaa lagu sheegay in ay tahay yareynta Saxmada Isgoyska Soobe, waxaana xusid mudan in dadka Shacabka ay dhibaato kala kulmaan Marista wadada.
Previous articleMadaxda Jabhada ONLF oo ku wajahan Magaalada Jigjiga
Next articleWasiir xaqiijiyay in Musharax Lafta Gareen uu hub la tagay Magaalada Baydhabo